आउनुस्, ब्रम्हलूट गरौं ~ brazesh
आउनुस्, ब्रम्हलूट गरौं
June 05, 2011 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ६०
उनी कुनै बेला मोफसलको एउटा एफ.एम. रेडियोमा हप्ताको एउटा आधा घण्टे कार्यक्रम चलाउँथे । कुनै गम्भीर वा विचार प्रधान कार्यक्रम पनि होइन । विशुद्ध मनोरञ्जनका नाममा उनी बजारबाट खरीद गरिएका सस्ता र गैरकानूनी सि.डी. हरु किनेर हिन्दी तथा अंग्रेजी गीतहरु बजाएर आफ्नो आधा घण्टाको कार्यक्रम टार्दथे । प्रतिलिपि अधिकार भन्ने पनि कुनै चरो हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई र उनको स्टेसन दुबैलाई थाहा थिएन । भए पनि उनीहरुलाई त्यसको कुनै मतलब थिएन । श्रष्टाहरुको पछाडि आफू लाग्नुपर्छ भन्ने हैन आफ्नो पछाडि श्रष्टाहरु लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुमा पर्दथे उनी । यहाँ नेर मूल कुरा उनी कस्ता थिए भन्ने हैन, प्रसंगवश मात्र उनको कुरा गरिएको हो ।
केही समय अघि तिनै मानिस सपना र उपलव्धिको यो सहर काठमाण्डौंमा भेटिए । उनको चालढाल, व्यक्तित्व, लवाइखवाइमा निकै ठैलो परिवर्तन भैसकेको थियो । गतिलै रकम पर्ने चारपाङ्ग्रे सवारीबाट गजक्क परेर ओर्लिएका उनको हातमा दुइवटा मोबाइल फोन थियो । एउटा उनी उत्रिंदा पनि बजिरहेको थियो, अर्को उनी उत्रिसकेपछि बज्न थाल्यो । उनको पछाडिपछाडि एकजना अर्का सहायकजन्य मानिस ओर्लेका थिए जसलाई उनी छिनछिनमा एउटा फोन थमाउँथे, अर्कोमा कुरा गर्थे । सहायकजन्य प्राणी सानो स्वरमा सर अर्को फोनमा भएको कुरा जानकारी गराउँथे र पालैपालो उनीहरुलाई होल्डमा राख्दथे । ती मानिसले नाडी, औंला र गलामा बेरेका सुनहरु हेर्दा सुनको मूल्यले आकाश छोयो भन्नेहरु सब फटाहा हुन् भन्ने लाग्थ्यो । पचासपटक जति घडी हेर्दै पाँच मिनेट जति उनले भलाकुसारी गर्दा थाहा भयो, आजकल उनले केही अरु साथीहरुसंग मिलेर काठमाण्डौंमा एउटा इन्जिनियरिंग कलेज खोलेका रहेछन् । परमेश्वरको परम अनुकम्पाले कलेज बेस्मारी चलेको पनि रहेछ । जाँदाजाँदै उनले नयाँ सत्रका लागि आफ्नो उज्जवल भविष्यका लागि कटिवद्ध कोही इच्छुक विद्यार्थीहरु छन् भने उनको कलेजमा पठाइदिनू भन्दै आफ्नो कार्ड थमाए । पूरा कोर्सका लागि लाग्ने रकम कति हो भन्ने पनि सुनाए र प्रति विद्यार्थी कति छ्याकन दिने हो भन्ने प्रतिशत सुनाएर लोभ्याउन पनि भ्याए ।
उनलाई नचिन्नेहरुका लागि उनको यो नयाँ रुपको के अर्थ लाग्थ्यो त भन्न सकिन्न, तर चिन्नेहरुका लागि उनले कलेज चलाएका छन् भन्न् आश्चर्यको नै कुरा थियो । यही कुरामा घोत्लिंदै जाँदा उनी त आजका समयको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् भन्ने लाग्न थाल्यो । किनभने हामीकहाँ जसले जे पनि गर्न पाउने गरि हामीलाई लोकतन्त्र आएको छ । जता हेरे पनि गर्मीको मौसममा लामखुट्टेका फूल जस्ता थोकका भाउमा विद्यालय, कलेज, अस्पताल र रिसर्च सेन्टरहरु उम्रिएका देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ मानौ यहाँ कुनै पनि कुराका लागि कुनै मापदण्डको आवश्यकता छैन । विशेष गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका कुराहरुमा पनि कुनै न्यूनतम आधार, पूर्वाधार र मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ भन्ने कसैलाई लाग्दैन । सलाइका बट्टा भन्न सुहाउने कोठाहरु भएका साँघुरो गल्ली भित्र दुइ आनामा बनेका घरहरुमा समेत ‘फलानोढिस्कानो इण्टरनेसनल स्कूल’हरु खुलेका हुन्छन् जहाँ कलिला कलिला बालबालिकाहरु खलखली पसीना काढ्दै दुइ एकान दुइ घोकिरहेका हुन्छन् । उदेक लाग्दो कुरा त के हो भने त्यस्ता स्कूलहरुका थाप्लोमा वीभत्स देखिने फ्लेक्समा गर्वसाथ पोतिएको हुन्छ, “बालबालिकाको सर्वाङ्गीण शारीरिक तथा वौद्धिक विकासका लागि ।” अधिकांश विद्यालयहरुका अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ पढ्ने बुनै पनि बालबालिकाको विकासको त कुरै छोडौं, उल्टो हुनु पर्ने स्वाभाविक विकास पनि हुँदैन होला ।
फोहोरै फोहोरका चीरस्थायी डुङ्गुरहरुका छेउमा हावा खेल्ने समेत झ्याल नभएका घरहरुमा शिशु स्याहार केन्द्रहरु खुलेका हुन्छन् । फूड प्वाइजनिंगका कारण केही महीना वा वर्ष मात्र पुगेका बालबालिकाहरुलाई अस्पताल कुदाउन परेका केही घटनाहरु देख्दा सुन्दा पनि आँखा चिम्लन वाध्य छन् अभिभावकहरु । अस्पताल, नर्सिंग होम र अहिले नयाँ चलन अनुसार भनिने रिसर्च तथा डायग्नोस्टिक सेन्टरहरुको त झन् कुरा गरि साध्यै छैन । कुखुराको भाले बास्नु अघि देखि उल्लू कराउनु भन्दा पछिसम्म कानका जाली च्यात्लान् जस्ता थरिथरिका प्रेसर हर्न बजाउँदै हुइँकिने सवारी साधनहरुका कोलाहल र तिनले उडाउने कालोमुश्लोको नजीकै चक्रपथका विभिन्न चोकहरुका छेउछाउमा, सहरका अति व्यस्त व्यापारिक स्थानहरुमा समेत पनि यस्ता स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरु गर्व साथ हरेक दिन सय्यौं विरामीका उपचार गरिरहेका हुन्छन् । यो धमिलो अमिलो सपनाको महानगर काठमाण्डौंमा उन्नत भविष्य र सजिलो जीवन बाँच्न् रहर बोकेर आएका मानिसहरुका वाध्यताको नाजायज फाइदा उठाएर पैसा कमाउन पल्केकाहरुलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्नु कसको प्राथमिकताको विषय हो भन्ने पनि थाहा छैन ।
आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र भनेर खुट्याउने भनेको त यो महानगरको संरचनामा असम्भवप्राय सपना भैसकेको छ । तर पनि कम से कम शिशु स्याहार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुरामा मानिसहरुलाई खुलेआम लूटपाट मच्चाउने छुट नदिन सकिंदैन र ? त्यस्ता काम गर्ने वा गर्न चाहनेहरुका ल्याकत, औकात, पृष्ठभूमि, क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, उद्देश्य जस्ता कुराहरुमा अलि सम्वेदनशील नीति नियम र अनुगमनका उपायहरु खोज्न संिकंदैन होला र ?
हुन त देशको जिम्मा लिएकाहरु अहिले यस्तो फूलमाथि ओथारा बसेका छन्, जसबाट कस्तो चल्ला कोरलिने हो, त्यो कस्तो रुप र चरित्र भएको हुनेछ अथवा त्यो ओथारामा नै तुहिने हो कि भन्ने कुरा तिनीहरुलाई नै पनि थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यसंग राख्ने ‘झीनामसीना’ कुरामा उनीहरुलाई सोच्ने फुर्सद कहाँ हुन्छ र ?